Ogaden News Agency (ONA) – Dagaallo Kadhacay Dhulka Axmaarada oo Ciidanka Wayaanaha Lagu Naafeeyay.
Dagaallo Kadhacay Dhulka Axmaarada oo Ciidanka Wayaanaha Lagu Naafeeyay.
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Axmaarada ee woqooyiga Itoobiya ayaa sheegaya dagaalo cul culus oo dhex maray ciidamada wayaanaha kuwooda Commond Post ga looyaqaano iyo ciidanka Jabhada dhulka Xabashida kadhaq dhaqaaqda ee magacooda loosoo gaabiyo ADMF.
War qoraal ah oo kasoo baxay xafiiska warfaafinta ee Jabhada Amara Democratic Movement Force (ADMF) ayaa lagu sheegay in ciidanka jabhadu ay weerar kuqaadeen fadhiisimo kuyaala badhtamaha Gobolka Axmaarada oo ay ciidanka wayaanuhu daganaayeen, halkaas oo sida ay Jabhadu sheegtay lagu laayay saraakiil badan oo ciidanka wayaanaha ah.
Sida hadalka Jabhada ADMF lagu sheegay ciidanka Jabhada ayaa bilihii lasoo dhaafay sare uqaaday weerarada ay kuqaadayaan fadhiisimaha ciidanka Gumaysiga, waxayna Jabhadu sheegtay in ay sare uqaadi doonaan dagaalada ay kuxoraynayaan dhulka Axmaarada ee woqooyiga Itoobiya.
Jabhada ADMF ayaa kamid ah Jabhadaha ugu xooga badan ee kadagaalama dhulka Xabashida, waxayna jabhadu xidhiidh aad uwayn laleedahay dadka shacabka ah ee deegaanka udhashay, waxayna maalinkasta dhinaca shacabka kahelaan taageero balaadhan.
Dhinaca kale waxaa magaalada Gonder ee dhulka Xabashida laga soo sheegayaa kacdoono waawayn oo dadka shacabka ah ay kudiidan yihiin taliska wayaanaha iyo cawaanta u adeegta, waxaana lasheegay in wadooyinka waawayn ee magaalada ay isugu soobaxeen kumanaan shacab ah oo dhalinyaro ubadan.
Dadka shacabka ah ee qoomiyada Axmaarada ayaan iyagu ladhacsanayn maamulka cusub ee wayaanaha, kuwaas oo sida ay shacabka Axmaaradu sheegeen aan dhinaca qoomiyada Axmaarada waxba usoo kordhinin, waxayna shacabka Axmaaradu sheegeen in TPLF lagubadalay oo kaliya OPDO.